အဖြေမဲ့ ပုစ္ဆာ၏ မူပြများ။ – PoemsCorner
အဖြေမဲ့ ပုစ္ဆာ၏ မူပြများ။
တိမ်တစ်စကြားက ထိုးထွက်လာတဲ့ နေရောင်ခြည်ဟာ အကာအကွယ်မပါပဲ ကျွန်တော့် မျက်နှာပေါ်ကို ဖြတ်ကနဲ ကျလာတဲ့
အချိန်မှာ လွန့်လူးနေတဲ့ အတွေး တွေကို အသက်ဆက်လို့ ကျွန်တော်ဟာ လူမသိ သူမသိ လောကပေါ် တပြန်နေထိုင်နိုင်ဖို့ အတွက်
နေ့ပြီးရင် ည ..ညဦးယံ ပြီးရင် မနက် ဆိုတာ ဖြစ်တည်လာတတ်တဲ့ ကျွန်တော်ရှင်သန်ရာ ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ ကျွန်တော် အတွက်တော့ မရိုးနိုင်တဲ့ ပုံပြပုစ္ဆာ တွေကို အဖန်ဖန်တလဲလဲ ပေးနေတတ်မြဲပါပဲ…။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ မေခွန်းသဏ္ဍန် နဲ့ ကျွန်တော့် အနီးအပါးကို သူက ချဉ်းကပ်လာ သလို….. တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ကျွန်တော် အမုန်းဆုံး အကြောင်းအရာတွေကို အတည်ပြုဖို့ သူက မေးခွန်းထုတ် တတ်ပြန်ပါတယ်…။
ဒါပေမယ့် ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ဟာ မငြင်းဆိုနိုင်သော ဘ၀ ပိုင်ရှင်တစ်ဦးမို့ သူပေးသမျှ ကို အသာတကြည် လက်ခံယူရင်
မျက်ရည်နဲ့ ရယ်သံကို အမှီးအမှောက်မတည့်စွာ ကျွန်တော့် ကိုယ်မှာ တပ်ဆင်ရင်း ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းကျော်လွှားခဲ့ရပါတယ်…။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ သူဟာ ပုံပြမှား အဖြေမဲ့ ပုစ္ဆာကို ကျွန်တော် ဖြေဆိုဖို့ အကျယ်တ၀င့် ချပြပါတော့တယ်…။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ သူပေးတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ဆိုလိုရင်း ကို ကျွန်တော် သိလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ပဲ…. ကျွန်တော်ဟာ အတ္တတွေကြားက မသာယာမှု ပဋိပက္ခ တွေကို မရင်းနှီးလိုပဲ စတင်ထိတွေ့ ရပါတော့တယ်…။
ဘ၀မှာ လက်တွဲဖော်မဲ့ ရှင်သန်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်များ အထီးကျန် ဆန်လိုက်ပါသလဲ တဲ့….. ဘ၀မှာ ဖေးမဖေါ် အကူအညီသဟဲ
မရှိပဲ ရှင်သန်ရခြင်းဟာ ဘယ်လောက်များ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်ကို တိုက်ခိုက်တတ်ပါသလဲ တဲ့…….။
ဒီမေးခွန်းဟာ မသာယာမှန်းသိရက်နဲ့ ကျွန်တော် ဒီမေးခွန်းရဲ့အပါးက ရုန်းမထွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး…။ လောကရဲ့ မတည်မြဲခြင်း သီအိုရီကို ဂဃနဏ သိထားပေမယ့် ကျွန်တော် ဒီမေးခွန်းကို မဖြေဆိုဖို့ မတော်လှန်ရဲ ခဲ့ပါဘူး…။
ကျွန်တော်ရှာဖွေရမယ့်ပုစ္ဆာရဲ့ အတွင်းမှာ ဘာတွေ ဘယ်လိုမူ သဘောတရားတွေ ရှိမှန်း ကျွန်တော် မသိပါဘူး ဒါပေမယ့် မေးခွန်းပုစ္ဆာ တစ်ခုရဲ့ ခရီးပုံပြ ဆုံးဖို့ ကျွန်တော်ပိုင် အသိတရားနဲ့ သုံးသပ်ပီး ပုစ္ဆာမဟုတ်တဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို ကျွန်တော် အချိန်ပေး ဖြေဆိုဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်……။
ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ….. ကျွန်တော့်ပိုင် ကျွန်တော့်ရဲ့ အရင်လို ကောင်းကင် ပြာပြာဟာ…. တိမ်ညိုတွေရစ်သိုင်းလာ တယ်.. ..။ လေတဖြူးဖြူး တိုက်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့် အိမ်ဝက လေညှင်းလေးတွေဝင်လာတဲ့ နေရာမှာ ခပ်ပြင်းပြင်းလေထန်မုန်းတိုင်း တွေ အစားထိုး ပြီး ၀င်ရောက်လာတယ်…။ ဒီထက် ဆိုးတာက မခွဲချင်ပဲ ခွဲခဲ့ရတဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေရဲ့ အားငယ်မှုကို ခံစားမှု ပေါင်းစုံနဲ့ ကြည့်ခဲ့ရတာပဲ..။
ကျွန်တော် စဉ်းစားပါတယ်…. ရွေးချယ်ခွင့် မပေးတဲ့ အချိန်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘာလို့ ပိုင်ကြရတာလဲ….။ အနားမညီနိုင်တဲ့
ဘ၀တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘာလို့ ထိတွေ့ရတာလဲ…။ အဝေးက တိမ်တွေကို ငေးပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘာလို့ အဆုံးအဆမရှိ မရယ်နိုင်
ကြတာလဲ….။ ကျွန်တော်တို့ မလိုချင်တဲ့ ပုစ္ဆာတွေကို လဲ ဘ၀က ဘာလို့ ခဏခဏ ပြန်ဖြေခိုင်းနေတာလဲ….။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က
ကော ဘာလို့ အသိမဲ့ရတာလဲ….။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော် အဖြေမဲ့ ပုစ္ဆာရဲ့ အဖြေကို ကိုယ့်ဘ၀မှာ မပေးဖူးတာတွေနဲ့ လဲ ပြီး ရလိုက်ပါတော့တယ်…။
ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင် မသိအောင် အတ္တတွေ နောက်ကို ရောင့်ရဲခြင်းကင်းစွားနဲ့ လိုက်တတ်နေပြီဆိုတာပါပဲ..၊
ကျွန်တော်ဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာ အရင်လို ကိုယ့်ဘ၀တေးသံကို တင်းတိမ်ခြင်း များစွာနဲ့ နားမဆင်နိုင်တော့ ဘူး ဆိုတာပါပဲ..၊
ကျွန်တော်ဟာ “အေးချမ်းမှုကို ခုတုံးလုပ်ပြီ ဘ၀တွေကို ချနင်းတတ်”တဲ့ သိုးမည်းတစကောင်ဖြစ် နေပြီဆိုတာ ပါပဲ…။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်မသိလိုက်တဲ့ လောကရဲ့ ပုံပြတရားတစ်ခုဟာ…..လောကမှာ ရှိနှင့်နေခဲ့ပြီးသားပါ ………။
…. “ဘယ်သူမှ….ဘယ်အရာမှ ကိုယ်လိုချင်သလို အရာရာ ပြီးပြည့်စုံခြင်း မရှိဘူး”ဆိုတဲ့ သီအိုရီတစ်ခု ဆိုတာပါပဲ…။
In: စကားပြေ Posted By: kyagee13 Date: Oct 31, 2012
မိုးကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်လိုက်တိုင်း မြူမိုင်းတွေအုံ့ဆိုင်းလို့မျက်ရည်တွေသာကြွေကျလာတဲ့ ကမ္ဘာ